Kuze kube manje, abasebenzi bekufanele bakhombise ngokukholisayo ukuthi batheleleka lapho besemsebenzini. Kepha izifundazwe eziyi-16 manje sezicabanga ukubeka umthwalo esibhedlela: Kwenze kube ubufakazi bokuthi isisebenzi asitholanga lesi sifo emsebenzini.
Enye yezinto eziningi ezenza i-coronavirus disease 2019 (i-COVID-19) kube nzima ukuyelapha ukuthi umuntu akakwazi ukukhomba ukuthi umuntu kungenzeka ukuthi usitholile kuphi lesi sifo noma kanjani. Abasebenzi bezempilo abathole i-COVID-19 (kanye nemindeni yabasebenzi bezempilo abashone ngenxa yalesi sifo) bathola ukuthi ukuzama ukuthola izinzuzo zezinxephezelo zabasebenzi noma izinzuzo zokufa kungaba yinto engenakwenzeka, kubika iKaiser Health News (KHN) namuhla.
Kuze kube manje, abasebenzi bekufanele bakhombise ngokukholisayo ukuthi batheleleka emsebenzini, akuyona impikiswano elula ukunqoba njengoba kunabathwali abaningi bezimpawu emphakathini.
Manje, ngokusho kweKHN, izifundazwe eziyi-16 kanye nePuerto Rico bafuna ukubeka umthwalo esibhedlela: kwenze kube ubufakazi bokuthi isisebenzi asitholanga lesi sifo emsebenzini.
"Izikweletu ziyahlukahluka kubasebenzi ababasebenzelayo," kubika i-KHN. “Abanye bavikela bonke abasuke emakhaya beyosebenza ngesikhathi se-oda lokuhlala ekhaya. Abanye bakhawulelwe kubaphenduli bokuqala nabasebenzi bezokunakekelwa kwempilo. Abanye bebengahlanganisa kuphela abasebenzi abagulayo ngezikhathi eziphuthumayo, kanti abanye bazosebenza isikhathi eside. ”
Izifundazwe ezahlukahlukene zithatha izindlela ezahlukahlukene, futhi ezinye zalezo zindlela ziphikiswa yizibhedlela nezinhlangano zamabhizinisi. I-KHN icaphuna umthethosivivinywa eNew Jersey owenza kube lula kubasebenzi ababalulekile abathole i-COVID-19 ngesikhathi sesimo esiphuthumayo ukufakazela ukuthi bayitholile emsebenzini.
UChrissy Buteas uyisikhulu esiphezulu sezindaba zikahulumeni zeNew Jersey Business & Industry Association, ephikisana nomthethosivivinywa, owaphasiswa yiSenate yezwe futhi usalindwe kwiGeneral Assembly. “Okusikhathazayo kakhulu ukuthi izindleko zalezi zimangalo zingagudluza uhlelo, obelungakhelwanga ukubhekana nezicelo ngesikhathi kubhebhetheka umhlaba wonke,” kusho uButeas.
U-KHN ubheka necala laseVirginia lapho umsizi wodokotela (PA) owenza izivivinyo ze-COVID kwadingeka ukuthi alaliswe esibhedlela lapho efika nalesi sifo isonto lonke, waphinde walimala engasebenzi amasonto amahlanu.
I-PA icele ukugcwalisa amafomu ezinxephezelo zabasebenzi. Wenqatshwa amafomu wabe esedilizwa ezinsukwini ezinhlanu kamuva, nemali yesibhedlela engu- $ 60,000. Ummeli uMichele Lewane umele iPA kuleli cala. Ngokusho kukaKHN: “ULewane uthe umthetho eVirginia uzobheka i-COVID-19 'njengesifo esijwayelekile sokuphila,' esifana nomkhuhlane noma umkhuhlane. Uthe kuzofanele afakazele "ngobufakazi obucacile nobukholisayo" bokuthi ubambe i-coronavirus esemsebenzini. "